You are at:Home»Publications»Articles»စီးပွားရေး – စစ်ရေးဆက်စပ်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်တို့၏ အပြုအမူ
By ThayNinGa on	 September 27, 2021 Articles, Publications
ယနေ့ခေတ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်သည် များစွာ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါရှိနေပေသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်ဆိုသည် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး စသည့် အခန်းကဏ္ဍများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ပညာရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာသည် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်အတွက် သာမက လူသားများ တစ်ဦးထက်ပိုမိုကာ စုပေါင်းထားသော လူသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု အတွက်လည်း များစွာ အရေးကြီးလှပေသည်။ ယနေ့ ခေတ်မှီတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အတတ်ပညာရပ်ဟု သတ်မှတ်မည် ဆိုပါက မှားမည် မဟုတ်ပေ။
ခေတ်မှီတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဟု ဆိုရာတွင်လည်း Scientific Thoughts ခေတ်မီ သိပ္ပံအတွေးအခေါ်များနှင့် Technological Innovation နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲ တွေးခေါ်မှုများကို ပေါင်းစပ်ပြီးတွေးခေါ်ခြင်းကို လက်တွေ့အသုံးချနေမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာများ အကြောင်းကို ပြောဆိုရာတွင် မဖြစ်မနေ ပါရှိရမည့် အချက်မှာ စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာ အင်အားစုများကို အကျိုးရှိစွာ ပေါင်းစပ်အသုံးချပြီး ဆောင်ရွက်လိုသော လုပ်ဆောင်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နေသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပိုမိုခေတ်မီ တိုးတက်လာသော တွေးခေါ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် ပါရှိသည့်အချက်များကို ထပ်မံပြီး ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်သည်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေသည့် ခေတ်သစ် စီမံခန့်ခွဲမှု အတွေးအခေါ်များထဲတွင် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် ယနေ့ခေတ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုကို တဆင့် မြှင့်တင်သည့်အနေဖြင့် ယခင်က စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်သည့် အခါတွင် Internal Factors ဟု ခေါ်သည့်မိမိ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ရှိသည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မကြာသေးမီ နှစ်များအတွင်း ဧည့်သည်ဦးရေ ကျဆင်းမှုကို မျက်မြင်တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အချိန်မတန်မီ အမေရိကန် ဟုခေါ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှု (ဥပမာ Lane၊ ၂၀၁၈) ကို ကြည့်ပါက သိရှိနိုင်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့သော ကောက်ချက်များသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သတင်းစာခေါင်းစီးများ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည်လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကို ထိခိုက်စေသော အချက်များအားလုံးကို စေ့စေ့စပ်စပ် စစ်ဆေးခြင်းအပေါ် အခြေခံကာ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဦးတည်ချက် စွမ်းဆောင်ရည်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ သမ္မတဖြစ်သည့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်သည် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ကာ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင် အလွန်တိကျသော ရှုထောင့်တစ်ခု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သမ္မတ Donald J. Trump ၏ Twitter အသုံးပြုမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ဈေးကွက်တန်ဖိုး၌ ထင်ဟပ်စေသော နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်တန်ဖိုးကို ဖော်ပြပါမည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ခရီးသွားများနှင့် ဦးတည်ရာတစ်ခုစီတိုင်းသည် ခရီးသွားဆုံးဖြတ်ချက်များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည့် အလားအလာ ရှိပေသည်။ အဓိကအနေဖြင့် ခရီးသွားများအနေဖြင့် ခရီးမသွားခင်တွင် ချမှတ်လေ့ရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သိစိတ်နှင့် မသိစိတ်က တွေးခေါ်သော တွေးခေါ်မှုများအပေါ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော အချက်များအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် ခရီးသွားနေရာများနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် သတင်းအချက်အလက် အမျိုးအစားအားလုံးကို မျှဝေရန် ပလက်ဖောင်းသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါပလက်ဖောင်းတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုင်၍ ဖြစ်စေ၊ အခြားသော သုံးစွဲသူများမှ ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်သော ဆိုရှယ်မီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဇယားကို လေ့လာကြည့်ရမည်ဆိုပါက သမ္မတထရန့် အနေနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြုရာတွင် ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိသော အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သမ္မတထရန့်သည် ၎င်း၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာ စာမျက်နှာ ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ၃၁ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် မီဒီယာအပိုင်းတို့ကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ၁၂ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖော်ပြရေးသား ခဲ့သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် မတော်တဆမှုများ စသည့် အကြောင်းအရာများကို ၈ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆံရေး၊ အကောင်းမြင်သော ညှိနှိုင်းပုံဖော်မှုများ အကြောင်းကို ၈ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားပြည်ပနိုင်ငံများ၏ဆက်ဆံရေးကို မကောင်းမြင်သော ညှိနှိုင်းပုံဖော်မှုများ အကြောင်းကို ၇ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအပေါ် နှစ်သက်မှုမရှိသော အကြောင်းအရာများကို ၈ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။ သမ္မတ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု သီအိုရီဖြစ်သော spygate နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ၂၂ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုသို့ သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအများကို အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် Twitter ပေါ်တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်နှင့် ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
Twitter ပေါ်တွင် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် အထက်ဖော်ပြပါ စာပိုဒ်တွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို သူ၏ သမ္မတသက်တမ်း တလျှောက် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ဈေးကွက်တန်ဖိုးအပေါ် များစွာသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ Twitter ပေါ်တွင် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရေးသားဖော်ပြမှုများအပေါ် မူတည်ပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်တန်ဖိုးများသည် ဖော်ပြပီးသည့် အချိန်မိနစ်မှစပြီး နောက်ထပ် (၅) မိနစ်အတွင်း တန်ဖိုးအတက်အကျ များစွာရှိနေသည်။ ပထမဦးဆုံး စတင်ဖော်ပြသော အချိန် (၁) မိနစ်မှစပီး (၁)မိနစ်ချင်းစီအလိုက် ဈေးကွက်တန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှုများမှာ အလွန်အင်မတန်ထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အချို့ရေးသား ဖော်ပြမှုများမှာ ကောင်းသောဘက် အပေါင်းလက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေခဲ့သော်လည်း သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ အမှတ်မထင် အနှုတ်လက္ခာပြ ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။
ပထမဦးစွာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများထဲမှ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သတင်းမီဒီယာအပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်အပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအကြောင်းကို ဦးစွာဖော်ပြလိုပါသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် သတင်းမီဒီယာအပိုင်းကိုရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်တန်ဖိုးသည် အပေါင်းလက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပထမတစ်မိနစ်တွင် စုစုပေါင်းဈေးကွက်တန်ဖိုး၏ ၀ ဒသမ ၀၀၀၂ ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယ နှစ်မိနစ်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၀၉ ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တတိယသုံးမိနစ်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ စတုတ္ထလေးမိနစ်တွင် ဝ ဒသမ ဝဝဝ၃ ခန့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပဉ္စမငါးမိနစ်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရေးသားဖော်ပြမှုများသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက် ဖော်ဆောင်မှုများအပေါ် အပေါင်းလက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကို ထင်ရှားသောသက်သေတစ်ခုဖြင့် ပြသနိုင်ပေသည်။
ဆက်လက်၍ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများထဲမှ အမေရိကန်နို င်ငံနှင့် အခြားပြည်ပ နိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ် အကောင်းမြင်သော ညှိနှိုင်းပုံဖော်မှုများ အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်အပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအကြောင်းကို ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားပြည်ပ နိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆံရေး အကောင်းမြင်သော ညှိနှိုင်းပုံဖော်မှုများ အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက် တန်ဖိုးသည် အနုတ် လက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပထမတစ်မိနစ်တွင် စုစုပေါင်းဈေးကွက်တန်ဖိုး၏ အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၁ ခန့် လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ ဒုတိယ နှစ်မိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၂၁ ခန့်လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ တတိယသုံးမိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၁၁ ခန့် လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ စတုတ္ထလေးမိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၁၂ ခန့်လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ ပဉ္စမငါးမိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၀၆ ခန့် လျှော့ကျလာခဲ့သည်။
၎င်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရေးသားဖော်ပြမှုများသည် ခရီးသွား လုပ်ငန်းဈေးကွက် ဖော်ပြမှုများအပေါ် အနုတ် လက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကို ထင်ရှားသော သက်သေတစ်ခုဖြင့် ပြသနိုင်ပါသည်။
တတိယအနေဖြင့် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများထဲမှ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများအပေါ် နှစ်သက်မှုမရှိသော အကြောင်းအရာများကို အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်အပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအပေါ် နှစ်သက်မှုမရှိသော အကြောင်းအရာများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက် တန်ဖိုးသည် အနုတ်ဘက်ဆောင်သော လက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ပထမတစ်မိနစ်တွင် စုစုပေါင်းဈေးကွက်တန်ဖိုး၏ ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်မိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၂၉ ခန့် လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ တတိယသုံးမိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၀၂ ခန့် လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ စတုတ္ထလေးမိနစ်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၁ ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပဉ္စမငါးမိနစ်တွင် အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခန့် လျှော့ကျလာခဲ့သည်။ ၎င်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ရေးသားဖော်ပြမှုများသည် ခရီးသွား လုပ်ငန်းဈေးကွက်ဖော်ပြမှုများအပေါ် အနုတ် လက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကို ထင်ရှားသော သက်သေတစ်ခုဖြင့် ထပ်မံ ပြသနိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဈေးကွက်ဖော်ပြမှုများအပေါ် အနုတ်လက္ခဏာပြ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကို ထင်ရှားသော သက်သေတစ်ခုဖြင့် ပြသနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ဖြင့် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် ရေးသားခဲ့သော အကြောင်းအရာများထဲမှ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အခြားပြည်ပ နိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ် မကောင်းမြင်သော ညှိနှိုင်းပုံဖော်မှုများအကြောင်းကို Twitter စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ပထမတစ်မိနစ်တွင် ဝ ဒသမ ဝဝ၃၉ ခန့် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ မိနစ်တွင် ၀.၀၀၂၁ ခန့် အဖြစ်လည်းကောင်း တတိယမိနစ်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၂၆ ခန့် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ စတုတ္ထမိနစ်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၂ ခန့်အဖြစ်လည်းကောင်း နောက်ဆုံး ပဉ္စမ ငါးမိနစ်မြောက်တွင် ၀ ဒသမ ၀၀၁၁ ခန့်အဖြစ်လည်းကောင်း အပေါင်းလက္ခဏာပြသော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် တိုးတက်သော ပြောင်းလဲမှုအနေဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲစေခဲ့သောကြောင့် သမ္မတ၏ ရေးသားဖော်ပြမှုသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြောင်းထပ်မံသတိပြုနိုင်သည်။ ထိုမှတဆင့်ထပ်မံပြီး သမ္မတ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု သီအိုရီဖြစ်သော Spygate နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် ပထမတစ်မိနစ်မှစတင်ပြီး အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၀၁၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၀၁၊ အနုတ် ၀ ဒသမ ၀၀၀၂၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၀၃၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၀၂ စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းရာများကြောင့် ၀ ဒသမ ၀၀၂၂၊ ၀ ဒသမ ၀၀၃၊ အနုတ် ၀ ဒသမ ၀ဝ၀၁၄၊ ၀.၀၀၀၂၊ ၀.၀၀၀၂) အဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် မတော်တဆမှုများကို ရေးသားဖော်ပြမှုများကြောင့် (အနုတ် ၀ ဒသမ ၀ဝ၀၉၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၄၊ ၀ ဒသမ ၀ဝဝ၈၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၇၄၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၂) အဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်အပေါ် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် နိုင်ငံရေးဘောဂဆိုင်ရာ သီအိုရီများကို ထည့်သွင်းလေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှု မရှိပါက အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိနိုင်ကြောင်းကို ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြေများကို အခြေခံပြီးလေ့လာပါမည်။ ဆက်လက်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကောင်းမွန်မှုသာ အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍတွင် အပိုင်း (၈) ပိုင်းပါဝင်သည်။
(၃) ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ထိန်းချုပ်သည့် စံသက်မှတ်ခြင်း
(၅) စစ်ဖက်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်မှု အတက်အကျ
(၆) ဗလာတီနီယားပူတင်နှင့် စစ်ရေး
(၇) ရုရှားတပ်မတော်၏ အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများ
ရုရှားနိုင်ငံ၏ အရပ်ဖက် – စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေးမှာ ခက်ခဲသော ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဝန်းရံလျက်ရှိသော NATO နောက်စစ်အုပ်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်ရေးအပေါ် အခြေခံပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဗလာဒီမီယာပူတင်၏ Hawkwish နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကြောင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးနေပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးမှာ ရေနံတင်ပို့ရောင်းချမှု အပေါ်လွန်ကဲစွာ အခြေခဲနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပူတင်၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာ ၄င်း၏ဩဇာခိုင်မာမှုရှိရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနေပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် ခိုင်မာသော အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
(၂) နောက်ခံသမိုင်း (ပြိုကွဲခြင်း)
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ရုရှားစစ်ရေးအခြေအနေသည် ပြိုကွဲလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ရုရှားအစိုးရအနေဖြင့် ဆိုဗီယက်အရာရှိနှင့် စစ်သည် ၂ ဒသမ ၆ သန်း ဟု ဖော်ပြသော်လည်း အမှန်တကယ်မှာမူ ထိုထက်နည်းပါးလျက် ရှိပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စစ်မှုထမ်း ၁ ဒသမ ၅ သန်း ဟု ဖော်ပြသော်လည်း ၄င်းမှာ ပိုမိုခန့်မှန်းဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ထိန်းချုပ်သည့် စံသတ်မှတ်ခြင်း .
ရုရှားတပ်မတော်မှာ အစိုးရနှင့် KGB ကြား ဓားစာခံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အင်အားချိနဲ့လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် KGB မှာ အာဏာပိုမိုကြီးထွားလာကာ ဆိုဗီယက်ယူနီယမ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်လျှော့ချပြီး တပ်မတော်ကို ဆင်းရဲမွဲတေစေခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကိစ္စတွင်သာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ယယ်ဆင်၏ အမိန့်အာဏာဖြင့်သာ ရပ်တည်နေခဲ့ပါသည်။
တပ်မတော်အသွင်ပြောင်းလဲရေးမှာ ရုရှားနိုင်ငံ လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ အနောက်အုပ်စု ပုံစံအဆင့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော အင်အားကြီးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ချေချင်းညာစစ်ပွဲ (၁၉၉၄-၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် အင်အား ၁ ဒသမ ၅ သန်းရှိသော်လည်း အင်အား (၄၀၀၀၀) သာ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ ချေချင်းညာစစ်ပွဲ (၁၉၉၉- ၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sergei Ivanov အနေဖြင့် အဆင့်မြင့် လေထီးတပ်ရင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် Rossia – Georganian စစ်ပွဲအပြီးတွင် ပုံစံသစ်ရုရှားတပ်ကို အသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အရာရှိ (၃၃၅၀၀၀) မှ (၂၂၀၀၀၀) ခန့်သို့ အင်အား လျှော့ချခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်၏ အမာခံကျောရိုးအဖြစ် NCO (အရာခံ၊ အကြပ်တပ်သား) တို့ကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံအား အမြဲတန်း အင်အားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်အောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အင်အား (၄၀၀၀၀၀) နှင့် စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဖြင့် အင်အား (၂၇၆ ၀၀၀) ရှိပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် တပ်မတော် ပုံစံပြောင်း ဖွဲ့စည်းမှုများ အောင်မြင်လျက်ရှိပါသည်။
ခရိုင်းမီးယား၊ ယူကရိန်းနှင့် Donbas ဒေသစစ်ပွဲများတွင် အဆင့်မြင့်စစ်သည်တို့ကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဆီးရီးယားဒေသလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ရုရှားအနေဖြင့် ခေတ်မီတပ်မတော်အဖြစ် တည်ထောင်နိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း ရုရှားနိုင်ငံတော်အတွက် အရေးပါသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စစ်သည်အင်အား (၉၅၀၀၀) ထပ်မံရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဏာငွေရရှိရေး သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိနေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု ရုရှားအနေဖြင့် တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည် ဆိုသကဲ့သို့ အင်အားကောင်းမွန်သော တပ်မတော်ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းရပါသည်။
တပ်မတော်ကို အသွင်ပြောင်းရာတွင် နိုင်ငံရေးသြဇာမရှိသူ ပြည်သူများ မပါဝင်မှုကြောင့် နှစ်ရှည် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ယယ်ဆင်၏ အင်အားချိနဲ့သော ဦးဆောင်မှုကြောင့် စစ်ဘက် နှင့် အရပ်ဘက်ဆက်ဆံရေး ပြိုကွဲလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၃ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးကြောင့် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ ဒူအာလွှတ်တော်အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ပြင်ဆင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ယယ်ဆင်အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်နှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်အရာရှိကြီးများ၏ အာဏာကို ချုပ်ကိုင်လိုသော်လည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အရပ်သား Sergei Ivanov အား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းမှာ တပ်မတော် အရာရှိမဟုတ်ဘဲ KGB နှင့် FSB အကြီးအကဲ ဖြစ်ပါသည်။ ပူတင်အနေဖြင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် (၂) ဆရရှိအောင် ဆောင်ရွတ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ပူတင်နှင့် မက်ဗီဒက်တို့သည် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါသည်။
(၆) ဗလာဒီမီယာပူတင် နှင့် စစ်ရေး
တပ်မတော်နှင့် ဆက်နွယ်မှုသည် ပူတင်၏ ဥပဒေပြဌာန်းမှုအတွက် အရေးပါသည်။ တပ်မတော်သည် ၄င်း၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ တည်မြဲရေးအတွက် အရေးပါသည်။ ရုရှားပြည်သူများအနေဖြင့် ပူတင်သည် တပ်မတော်ကို လေးစားပြီး ရုရှားနိုင်ငံ မဟာဩဇာရရှိရေးအတွက် ခိုင်မြဲသော နိုင်ငံခြားရေးဝါဒကို စွဲကိုင်သော သူအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ KGB နှင့် FSB အတွေ့အကြုံများအရ ပူတင်သည် တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံလုံခြုံရေးကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံအား NATO နှင့် အင်အားယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးမှ နိုင်ငံအာဏာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအားနည်းမှုကြောင့် အနောက်အုပ်စုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ပူတင်အနေဖြင့် တပ်မတော်အား ခေတ်မီတပ်မတော်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်ကို ရုရှားစာစောင်များက ဖော်ပြနေပါသည်။ ခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်နှင့် လက်နက်များကို ပြသနေသော်လည်း လုံလောက်သော အရေအတွက်ထုတ်လုပ်ရန် ငွေကြေးမလုံလောက်မှု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ NATO မဆိုထားနှင့် တရုတ်နှင့်ပင် ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပင် လုံလောက်သော ဘဏ္ဍာအင်အားမရှိဟု ဆိုရပေမည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စစ်သည်အင်အား (၉၅၀၀၀) ရရှိရန်ပင် ခက်ခဲနေပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူမည့် အသက်ကို တိုးမြှင့်ခဲ့သောကြောင့် ဆန္ဒပြများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးခဲ့သော ၂၀၀၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် တို့မှာ လွန်မြောက်ခဲ့ပြီး မြင့်မားနေသော ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ထိန်းထားနိုင်ရန် နိုင်ငံရေးအခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ စာရင်းပျောက်နေပါသည်။ လက်စားမှုပြဿနာကြောင့် ပူတင်၏ နိုင်ငံရေး အနေအထားမှာ ပျက်ပြယ်သွားနိုင်ပါသည်။ လက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်မှသာလျှင် နိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှု ရရှိပါမည်။
ပူတင်အနေဖြင့် တပ်မတော် အင်အားကြီးထွားရေးအတွက် မည်သို့ပင် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း မြင်နိုင်သော အနာဂတ်တွင် NATO နှင့် ယှဉ်နိုင်သောအဆင့်သို့ မရောက်ရှိနိုင်သေးပေ။ အကြောင်းမှာ အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေး မယှဉ်နိုင်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ယခုဖြစ်ရပ်မှာ ဇာဘုရင် လက်ထက်မှာစ၍ ယနေ့တိုင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရုရှားနိုင်ငံသည် ထင်မြင်ရသကဲ့သို့ မသန်စွမ်း၊ ထင်မြင်ရသကဲ့သို့ အင်အားမချိနဲ့ပါ ဟူသော စကားပုံမှာ ယခုအချိန်ထိ မှန်ကန်နေပါသည်။ ကြိုးစားတည်ဆောက်နေသော်လည်း တပ်မတော်အသွင်ပြောင်းရေးမှာ လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပါသည်။ ရုရှား အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေသောအရာမှာ ဘဏ္ဍာရေး ပင်ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော် အနေဖြင့် အရပ်ဘက်ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရန် မည်သို့ပင် ကြိုးစားနေသော်လည်း အသုံးစရိတ် မလုံလောက်မှုကြောင့် အသုံးစရိတ် မလုံလောက်မှုကြောင့် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေ။
ထိုသို့ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်မှုမှာ ပူတင်အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၄င်း၏ ရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဏာငွေ လိုအပ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အနေဖြင့် Putin ၏ Hawkish Foreign Policy ကို ထောက်ခံပံ့ပိုးပေးလိုသော်လည်း ယူကရိန်းနှင့် ဆီးရီးယား ကဲ့သို့သော ကိစ္စများတွင် ဘဏ္ဏာရေး အသုံးစရိတ်များ ကုန်ကျမှုအတွက် ခက်ခဲနေပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သော အငြိမ်းစားယူခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ထိ ရုရှားစီးပွားရေးကောင်းမွန်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် ရုရှားပြည်သူများမှာ ပူတင်၏ Hawkish Foreign Policy နှင့် တပ်မတော်အင်အားကြီးထွားရေးကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေကြပါသည်။
ဘဏ္ဏာရေးပြဿနာနှင့် လာဘ်စားမှုပြဿနာမှာ ပူတင်၏ အုပ်ချုပ်ရေးအား ထိခိုက်စေသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ဖြတ်တောက်မှုများအား ဟန့်တားနိုင်ပါက ၄င်းအတွက် ထောက်ခံမှု ပိုမိုရရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုပါက လူမှုအကျိုးခံစားခွင့်ကို ဖြတ်တောက်ရမည် ဖြစ်သော်ကြောင့် ပြည်သူလူထု၏ ခါးသီးသော ခံစားချက်များ ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိပါက နိုင်ငံတွင်း အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ သီအိုရီများကို ထည့်သွင်းဆင်ခြင်လုပ်ဆောင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဆိုသည်မှာ လွန်စွာအင်မတန်မှ အရေးကြီးပြီး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည်တို့အပေါ်တွင် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပြီး နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ၏ အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် Digital Diplomacy နှင့်သက်ဆိုင်သော သမ္မတ၏ သေးငယ်သော အပြုအမူလေးကပင်လျှင် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှ အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အဓိကအချက်အချာဖြစ်သော ‘တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်’ ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ နိုင်ငံ၏ ကောင်းမွန်သည့် အင်အားပြယုဂ်ဖြစ်သော အင်အားများကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အရပ်ဖက် – စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသည် အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော တပ်မတော်ဘက်မှတွေးခေါ်သော ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ စီးပွားရေးအမြင်ဘက်မှ ပြန်လည်စဉ်းစားသော တပ်မတော်၏ ကာကွယ်ရေးအင်အားမြှင့်တင်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ညီညွှတ်မျှတစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော သမ္မတ ဘလာတီမီယာပူတင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ပြိုင်နက်ထဲတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ သမ္မတဖြစ်သော အမေရိကန်သမ္မတသည် သမ္မတရာထူးနှင့် မညီ မသင့်တော်သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံဟု မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသော အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ သေးငယ်သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းပင်လျှင် အနုတ်လက္ခဏာပြသော ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းဥပမာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကြီးမားသော နိုင်ငံ၏ အခြားကဏ္ဍများကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် မည်မျှသော ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း ဟူသော မေးခွန်းများမှာ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် National Interest ဟူသော အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
(ရဲမင်းအောင်သည် စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပါရဂူကျမ်း ပြုစုနေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး Project Management၊ Business Management နှင့် Administration အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာခဲ့သည်။ စာရေးသူသည် စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှု (မဟာဘွဲ့) ကို ရရှိထားသူ ဖြစ်သည်။ စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ကို တက်ရောက်သင်ယူနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ယခုဖော်ပြသည့် စီးပွားရေး – စစ်ရေးဆက်စပ်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်တို့၏ အပြုအမှု ဆောင်းပါးသည် စာရေးသူ၏ ပါရဂူဘွဲ့အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုအပ်သည့် ထုတ်ဝေမှုကို ပြုလုပ်သည့်အနေဖြင့် ရေးသားတင်ပြခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။)
စီးပှားရေး – စဈရေးဆကျစပျမှုနှငျ့ ခေါငျးဆောငျတို့၏ အပွုအမူ
ယနခေ့တျေတှငျ စီမံခနျ့ခှဲမှုပညာရပျသညျ မြားစှာ အရေးပါသညျ့ အခနျးကဏ်ဍတှငျ ပါရှိနပေသေညျ။ စီမံခနျ့ခှဲမှု ပညာရပျဆိုသညျ စီးပှားရေး၊ နိုငျငံတျော တညျဆောကျရေး စသညျ့ အခနျးကဏ်ဍမြားအတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျသော ပညာရပျပငျ ဖွဈသညျ။ စီမံခနျ့ခှဲမှုပညာသညျ လူတဈဦး တဈယောကျအတှကျ သာမက လူသားမြား တဈဦးထကျပိုမိုကာ စုပေါငျးထားသော လူသားအဖှဲ့အစညျးမြား၏ စုပေါငျးလုပျဆောငျမှု အတှကျလညျး မြားစှာ အရေးကွီးလှပသေညျ။ ယနေ့ ခတျေမှီတိုးတကျပွောငျးလဲနသေညျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျး အတှကျ စီမံခနျ့ခှဲမှုပညာရပျသညျ မရှိမဖွဈလိုအပျသော အတတျပညာရပျဟု သတျမှတျမညျ ဆိုပါက မှားမညျ မဟုတျပေ။
ခတျေမှီတိုးတကျပွောငျးလဲနသေညျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှကျဟု ဆိုရာတှငျလညျး Scientific Thoughts ခတျေမီ သိပ်ပံအတှေးအချေါမြားနှငျ့ Technological Innovation နညျးပညာဆိုငျရာ ဆငျ့ကဲ့တိုးတကျပွောငျးလဲ တှေးချေါမှုမြားကို ပေါငျးစပျပွီးတှေးချေါခွငျးကို လကျတှအေ့သုံးခနြမှေုဖွငျ့ လုပျဆောငျဆိုလိုခွငျး ဖွဈသညျ။ ထိုကဲ့သို့ စီမံခနျ့ခှဲမှု အတတျပညာမြား အကွောငျးကို ပွောဆိုရာတှငျ မဖွဈမနေ ပါရှိရမညျ့ အခကျြမှာ စီးပှားစီမံခနျ့ခှဲမှု၏ အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုခကျြ ဖွဈသညျ။ စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုသညျမှာ အငျအားစုမြားကို အကြိုးရှိစှာ ပေါငျးစပျအသုံးခပြွီး ဆောငျရှကျလိုသော လုပျဆောငျမှုမြားကို အောငျမွငျစှာ ဆောငျရှကျခွငျး ပငျဖွဈသညျ။ ထိုသို့ လုပျဆောငျနသေညျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုတှငျ ပိုမိုခတျေမီ တိုးတကျလာသော တှေးချေါမှုနှငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုမြားတှငျ ပါရှိသညျ့အခကျြမြားကို ထပျမံပွီး ဆှေးနှေးရမညျ ဖွဈသညျ။
တိုးတကျပွောငျးလဲလာနသေညျ့ ခတျေသဈ စီမံခနျ့ခှဲမှု အတှေးအချေါမြားထဲတှငျ တိုးတကျပွောငျးလဲမှု အမွဲတမျးဖွဈပျေါနသေညျ့ ယနခေ့တျေတှငျ စီမံခနျ့ခှဲမှုကို တဆငျ့ မွှငျ့တငျသညျ့အနဖွေငျ့ ယခငျက စီးပှားရေးဆိုငျရာ ဆုံးဖွတျခကျြမြားကို ခမြှတျသညျ့ အခါတှငျ Internal Factors ဟု ချေါသညျ့မိမိ အဖှဲ့အစညျးအတှငျးတှငျ ရှိသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို အခွခေံပွီး ဆုံးဖွတျလရှေိ့ကွသညျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုသညျ မကွာသေးမီ နှဈမြားအတှငျး ဧညျ့သညျဦးရေ ကဆြငျးမှုကို မကျြမွငျတှရှေိ့ ခဲ့ရသညျ။ ခရီးသှားလုပျငနျးတှငျ အခြိနျမတနျမီ အမရေိကနျ ဟုချေါသော စှမျးဆောငျရညျကဆြငျးမှု (ဥပမာ Lane၊ ၂၀၁၈) ကို ကွညျ့ပါက သိရှိနိုငျပသေညျ။ ဤကဲ့သို့သော ကောကျခကျြမြားသညျ ဆှဲဆောငျမှုရှိသော သတငျးစာခေါငျးစီးမြား ဖွဈသျောလညျး ၎င်းငျးတို့သညျလာရောကျလညျပတျသူအရအေတှကျကို ထိခိုကျစသေော အခကျြမြားအားလုံးကို စစေ့စေ့ပျစပျ စဈဆေးခွငျးအပျေါ အခွခေံကာ ဖျောပွခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ နိုငျငံတဈနိုငျငံ၏ ဦးတညျခကျြ စှမျးဆောငျရညျသညျ နိုငျငံတဈနိုငျငံ၏ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျ၏ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ သကျရောကျမှုရှိသညျ့ ရှုပျထှေးသော လုပျငနျးတဈခု ဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၌ သမ်မတဖွဈသညျ့ နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျသညျ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျမှုကို ရှုထောငျ့ပေါငျးစုံမှ ထညျ့သှငျးတှကျခကျြကာ စဉျးစားရမညျဖွဈသညျ။
ဤလလေ့ာမှုတှငျ အလှနျတိကသြော ရှုထောငျ့တဈခု၏ အကြိုးသကျရောကျမှုကို သမ်မတ Donald J. Trump ၏ Twitter အသုံးပွုမှုကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ခရီးသှားလုပျငနျး၏ ဈေးကှကျတနျဖိုး၌ ထငျဟပျစသေော နိုငျငံ၏ ခရီးသှားလုပျငနျး ဈေးကှကျတနျဖိုးကို ဖျောပွပါမညျ။ ခရီးသှားလုပျငနျး ဈေးကှကျရှုထောငျ့မှကွညျ့လြှငျ ခရီးသှားမြားနှငျ့ ဦးတညျရာတဈခုစီတိုငျးသညျ ခရီးသှားဆုံးဖွတျခကျြမြားကို အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျမညျ့ အလားအလာ ရှိပသေညျ။ အဓိကအနဖွေငျ့ ခရီးသှားမြားအနဖွေငျ့ ခရီးမသှားခငျတှငျ ခမြှတျလရှေိ့သော ဆုံးဖွတျခကျြမြား၊ သိစိတျနှငျ့ မသိစိတျက တှေးချေါသော တှေးချေါမှုမြားအပျေါတှငျ ထညျ့သှငျးစဉျးစားသော အခကျြမြားအပျေါတှငျ အခွခေံပါသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ နှဈအနညျးငယျအတှငျး ဆိုရှယျမီဒီယာ ပျေါပေါကျလာခွငျးသညျ ခရီးသှားနရောမြားနှငျ့ ပတျသကျသော သတငျးအခကျြအလကျမြားအပါအဝငျ သတငျးအခကျြအလကျ အမြိုးအစားအားလုံးကို မြှဝရေနျ ပလကျဖောငျးသဈတဈခု ဖွဈလာခဲ့သညျ။ အဆိုပါပလကျဖောငျးတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမှ တိုကျရိုကျဖွဈစေ၊ သှယျဝိုငျ၍ ဖွဈစေ၊ အခွားသော သုံးစှဲသူမြားမှ ဖွဈစေ လုပျဆောငျသော ဆိုရှယျမီဒီယာ လှုပျရှားမှုကို ဖွဈစသေညျ။
အထကျဖျောပွပါ ဇယားကို လလေ့ာကွညျ့ရမညျဆိုပါက သမ်မတထရနျ့ အနနှေငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာကို အသုံးပွုရာတှငျ ရေးသားဖျောပွလရှေိ့သော အကွောငျးအရာမြားကို တှရှေိ့နိုငျသညျ။ သမ်မတထရနျ့သညျ ၎င်းငျး၏ ဆိုရှယျမီဒီယာ စာမကျြနှာ ၁ဝဝ ရာခိုငျနှုနျးတှငျ ၃၁ ဒသမ ၇၆ ရာခိုငျနှုနျးကို အမရေိကနျနိုငျငံ၏ ပုံနှိပျထုတျဝခွေငျးနှငျ့ မီဒီယာအပိုငျးတို့ကို ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ ဆကျလကျပွီး အမရေိကနျနိုငျငံ၏ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားနှငျ့ သကျဆိုငျသော အကွောငျးအရာမြားကို ၁၂ ဒသမ ၉၄ ရာခိုငျနှုနျး ဖျောပွရေးသား ခဲ့သညျ။ သဘာဝဘေးအန်တရာယျနှငျ့ မတျောတဆမှုမြား စသညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို ၈ ဒသမ ၂၄ ရာခိုငျနှုနျး ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ အမရေိကနျနိုငျငံနှငျ့ အခွားပွညျပနိုငျငံမြား၏ ဆကျဆံရေး၊ အကောငျးမွငျသော ညှိနှိုငျးပုံဖျောမှုမြား အကွောငျးကို ၈ ဒသမ ၂၄ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ အမရေိကနျနိုငျငံနှငျ့ အခွားပွညျပနိုငျငံမြား၏ဆကျဆံရေးကို မကောငျးမွငျသော ညှိနှိုငျးပုံဖျောမှုမြား အကွောငျးကို ၇ ဒသမ ၆၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူမြားအပျေါ နှဈသကျမှုမရှိသော အကွောငျးအရာမြားကို ၈ ဒသမ ၂၄ ရာခိုငျနှုနျးရေးသား ဖျောပွခဲ့သညျ။ သမ်မတ၏ ပူးပေါငျးကွံစညျမှု သီအိုရီဖွဈသော spygate နှငျ့ပတျသတျပွီး ၂၂ ဒသမ ၃၅ ရာခိုငျနှုနျး ရေးသား ဖျောပွခဲ့သညျ။
ထိုသို့ သကျဆိုငျရာ အကွောငျးအမြားကို အမရေိကနျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရနျ့ သကျတမျးတဈလြှောကျ Twitter ပျေါတှငျ ရေးသား ဖျောပွခဲ့သညျ။ ဆကျလကျပွီး ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျနှငျ့ ပတျသတျသော အကွောငျးအရာမြားကို ဆကျလကျဖျောပွပါမညျ။
Twitter ပျေါတှငျ သမ်မတ ဒျေါနယျထရနျ့သညျ အထကျဖျောပွပါ စာပိုဒျတှငျပါဝငျသော အကွောငျးအရာမြားကို သူ၏ သမ်မတသကျတမျး တလြှောကျ ရေးသားဖျောပွခဲ့သညျ။ ၎င်းငျး၏ ရေးသားဖျောပွခကျြမြားသညျ ခရီးသှားလုပျငနျး၏ ဈေးကှကျတနျဖိုးအပျေါ မြားစှာသော အကြိုးသကျရောကျမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။ Twitter ပျေါတှငျ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့၏ ရေးသားဖျောပွမှုမြားအပျေါ မူတညျပီး ခရီးသှားလုပျငနျး ဈေးကှကျတနျဖိုးမြားသညျ ဖျောပွပီးသညျ့ အခြိနျမိနဈမှစပွီး နောကျထပျ (၅) မိနဈအတှငျး တနျဖိုးအတကျအကြ မြားစှာရှိနသေညျ။ ပထမဦးဆုံး စတငျဖျောပွသော အခြိနျ (၁) မိနဈမှစပီး (၁)မိနဈခငျြးစီအလိုကျ ဈေးကှကျတနျဖိုး ပွောငျးလဲမှုမြားမှာ အလှနျအငျမတနျထငျရှားစှာ ပွောငျးလဲစခေဲ့သညျ။ အခြို့ရေးသား ဖျောပွမှုမြားမှာ ကောငျးသောဘကျ အပေါငျးလက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြားဖွဈစခေဲ့သျောလညျး သမ်မတ ဒျေါနယျထရနျ့၏ အမှတျမထငျ အနှုတျလက်ခာပွ ပွောငျးလဲမှုမြားကို ဖွဈပျေါစခေဲ့ပါသညျ။
ပထမဦးစှာ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့ ရေးသားဖျောပွခဲ့သော အကွောငျးအရာမြားထဲမှ အမရေိကနျနိုငျငံ၏ ပုံနှိပျထုတျဝခွေငျးနှငျ့ သတငျးမီဒီယာအပိုငျးနှငျ့သကျဆိုငျသော ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျး ဈေးကှကျအပျေါတှငျ အကြိုးသကျရောကျစခွေငျးအကွောငျးကို ဦးစှာဖျောပွလိုပါသညျ။ ပုံနှိပျထုတျဝခွေငျးနှငျ့ သတငျးမီဒီယာအပိုငျးကိုရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျး ဈေးကှကျတနျဖိုးသညျ အပေါငျးလက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။ ပထမတဈမိနဈတှငျ စုစုပေါငျးဈေးကှကျတနျဖိုး၏ ၀ ဒသမ ၀၀၀၂ ခနျ့ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ ဒုတိယ နှဈမိနဈတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၉ ခနျ့ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ တတိယသုံးမိနဈတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခနျ့ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ စတုတ်ထလေးမိနဈတှငျ ဝ ဒသမ ဝဝဝ၃ ခနျ့တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ ပ ဉ်စမငါးမိနဈတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခနျ့ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့၏ ရေးသားဖျောပွမှုမြားသညျ ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျ ဖျောဆောငျမှုမြားအပျေါ အပေါငျးလက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြားဖွဈပျေါစခေဲ့သညျကို ထငျရှားသောသကျသတေဈခုဖွငျ့ ပွသနိုငျပသေညျ။
ဆကျလကျ၍ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့ ရေးသားဖျောပွခဲ့သော အကွောငျးအရာမြားထဲမှ အမရေိကနျနို ငျငံနှငျ့ အခွားပွညျပ နိုငျငံမြား၏ ဆကျဆံရေးအပျေါ အကောငျးမွငျသော ညှိနှိုငျးပုံဖျောမှုမြား အကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျအပျေါတှငျ အကြိုးသကျရောကျစခွေငျးအကွောငျးကို ဆကျလကျ ဖျောပွပါမညျ။ အမရေိကနျနိုငျငံနှငျ့ အခွားပွညျပ နိုငျငံမြား၏ ဆကျဆံရေး အကောငျးမွငျသော ညှိနှိုငျးပုံဖျောမှုမြား အကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျ တနျဖိုးသညျ အနုတျ လက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။ ပထမတဈမိနဈတှငျ စုစုပေါငျးဈေးကှကျတနျဖိုး၏ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၁ ခနျ့ လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ ဒုတိယ နှဈမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၂၁ ခနျ့လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ တတိယသုံးမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၁၁ ခနျ့ လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ စတုတ်ထလေးမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၁၂ ခနျ့လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ ပ ဉ်စမငါးမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၆ ခနျ့ လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။
၎င်းငျးကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့၏ ရေးသားဖျောပွမှုမြားသညျ ခရီးသှား လုပျငနျးဈေးကှကျ ဖျောပွမှုမြားအပျေါ အနုတျ လက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြားဖွဈပျေါစခေဲ့သညျကို ထငျရှားသော သကျသတေဈခုဖွငျ့ ပွသနိုငျပါသညျ။
တတိယအနဖွေငျ့ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့ ရေးသားဖျောပွခဲ့သော အကွောငျးအရာမြားထဲမှ ရှပွေ့ောငျး နထေိုငျသူမြားအပျေါ နှဈသကျမှုမရှိသော အကွောငျးအရာမြားကို အကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျအပျေါတှငျ အကြိုးသကျရောကျစခွေငျးအကွောငျးကို ဆကျလကျဖျောပွပါမညျ။ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူမြားအပျေါ နှဈသကျမှုမရှိသော အကွောငျးအရာမြားကွောငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျ တနျဖိုးသညျ အနုတျဘကျဆောငျသော လက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။ ပထမတဈမိနဈတှငျ စုစုပေါငျးဈေးကှကျတနျဖိုး၏ ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခနျ့ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ ဒုတိယနှဈမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၂၉ ခနျ့ လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ တတိယသုံးမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၂ ခနျ့ လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ စတုတ်ထလေးမိနဈတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၁ ခနျ့ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ ပ ဉ်စမငါးမိနဈတှငျ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၃ ခနျ့ လြှော့ကလြာခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့၏ရေးသားဖျောပွမှုမြားသညျ ခရီးသှား လုပျငနျးဈေးကှကျဖျောပွမှုမြားအပျေါ အနုတျ လက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြားဖွဈပျေါစခေဲ့သညျကို ထငျရှားသော သကျသတေဈခုဖွငျ့ ထပျမံ ပွသနိုငျပါသညျ။ ခရီးသှားလုပျငနျး ဈေးကှကျဖျောပွမှုမြားအပျေါ အနုတျလက်ခဏာပွ ပွောငျးလဲမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျကို ထငျရှားသော သကျသတေဈခုဖွငျ့ ပွသနိုငျပါသညျ။
ထိုသို့ဖွငျ့ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့ ရေးသားခဲ့သော အကွောငျးအရာမြားထဲမှ အမရေိကနျနိုငျငံနှငျ့ အခွားပွညျပ နိုငျငံမြား၏ ဆကျဆံရေးအပျေါ မကောငျးမွငျသော ညှိနှိုငျးပုံဖျောမှုမြားအကွောငျးကို Twitter စာမကျြနှာပျေါတှငျ ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ပထမတဈမိနဈတှငျ ဝ ဒသမ ဝဝ၃၉ ခနျ့ အဖွဈလညျးကောငျး၊ ဒုတိယ မိနဈတှငျ ၀.၀၀၂၁ ခနျ့ အဖွဈလညျးကောငျး တတိယမိနဈတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၂၆ ခနျ့ အဖွဈလညျးကောငျး၊ စတုတ်ထမိနဈတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၂ ခနျ့အဖွဈလညျးကောငျး နောကျဆုံး ပဉ်စမ ငါးမိနဈမွောကျတှငျ ၀ ဒသမ ၀၀၁၁ ခနျ့အဖွဈလညျးကောငျး အပေါငျးလက်ခဏာပွသော ပွောငျးလဲမှုမြားဖွဈပျေါစခေဲ့ပွီး ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျ တနျဖိုးအပျေါတှငျ တိုးတကျသော ပွောငျးလဲမှုအနဖွေငျ့ တိုးတကျပွောငျးလဲစခေဲ့သောကွောငျ့ သမ်မတ၏ ရေးသားဖျောပွမှုသညျ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိကွောငျးထပျမံသတိပွုနိုငျသညျ။ ထိုမှတဆငျ့ထပျမံပွီး သမ်မတ၏ ပူးပေါငျးကွံစညျမှု သီအိုရီဖွဈသော Spygate နှငျ့ပတျသကျပွီး ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ ပထမတဈမိနဈမှစတငျပွီး အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၁၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၀၁၊ အနုတျ ၀ ဒသမ ၀၀၀၂၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၀၃၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၀၂ စသညျဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အမရေိကနျနိုငျငံ၏ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုမြားနှငျ့ သကျဆိုငျသော အကွောငျးရာမြားကွောငျ့ ၀ ဒသမ ၀၀၂၂၊ ၀ ဒသမ ၀၀၃၊ အနုတျ ၀ ဒသမ ဝဝဝ၁၄၊ ၀.၀၀၀၂၊ ၀.၀၀၀၂) အဖွဈဖွငျ့လညျးကောငျး ဆကျလကျပွီး အမရေိကနျနိုငျငံ၏ သဘာဝဘေးအန်တရာယျနှငျ့ မတျောတဆမှုမြားကို ရေးသားဖျောပွမှုမြားကွောငျ့ (အနုတျ ၀ ဒသမ ဝဝဝ၉၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၄၊ ၀ ဒသမ ဝဝဝ၈၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၇၄၊ ၀ ဒသမ ၀၀၀၂) အဖွဈဖွငျ့လညျးကောငျး ခရီးသှားလုပျငနျးဈေးကှကျအပျေါ ပွောငျးလဲမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။
စီးပှားရေးတိုးတကျမှုအတှကျ နိုငျငံရေးဘောဂဆိုငျရာ သီအိုရီမြားကို ထညျ့သှငျးလလေ့ာရမညျဖွဈပွီး စီးပှားရေးတိုးတကျမှု မရှိပါက အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေးကို ပွုလုပျရာတှငျ အခကျအခဲမြားစှာ ရှိနိုငျကွောငျးကို ရုရှားနိုငျငံတှငျ ဖွဈပျေါခဲ့သော အခွမြေားကို အခွခေံပွီးလလေ့ာပါမညျ။ ဆကျလကျပွီး ရုရှားနိုငျငံ၏ စီးပှားရေးကောငျးမှနျမှုသာ အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေးကို ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျးကို ဆှေးနှေးတငျပွပါမညျ။ ရုရှားနိုငျငံ၏ အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေး ကဏ်ဍတှငျ အပိုငျး (၈) ပိုငျးပါဝငျသညျ။
(၃) ပိုမိုကောငျးမှနျစရေနျ ထိနျးခြုပျသညျ့ စံသကျမှတျခွငျး
(၅) စဈဖကျပူးပေါငျး လုပျကိုငျမှု အတကျအကြ
(၆) ဗလာတီနီယားပူတငျနှငျ့ စဈရေး
(၇) ရုရှားတပျမတျော၏ အနာဂတျစိနျချေါမှုမြား
ရုရှားနိုငျငံ၏ အရပျဖကျ – စဈဖကျ ဆကျဆံရေးမှာ ခကျခဲသော ကိစ်စရပျတဈခုဖွဈပါသညျ။ ယငျးဆကျဆံရေးမှာ ဝနျးရံလကျြရှိသော NATO နောကျစဈအုပျနှငျ့ ပွိုငျဆိုငျရေးအပျေါ အခွခေံပါသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဗလာဒီမီယာပူတငျ၏ Hawkwish နိုငျငံခွားရေး မူဝါဒကွောငျ့ ပိုမိုရှုပျထှေးနပေါသညျ။ ရုရှားနိုငျငံ၏ စီးပှါးရေးမှာ ရနေံတငျပို့ရောငျးခမြှု အပျေါလှနျကဲစှာ အခွခေဲနခွေငျး ဖွဈပါသညျ။ ပူတငျ၏ နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒမှာ ၄ငျး၏ဩဇာခိုငျမာမှုရှိရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုနပေါသညျ။ ရုရှားနိုငျငံအနဖွေငျ့ ခိုငျမာသော အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေး တညျဆောကျရနျလိုအပျလကျြရှိပါသညျ။
(၂) နောကျခံသမိုငျး (ပွိုကှဲခွငျး)
၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈတှငျ ဖွဈပျေါခဲ့သော အခွအေနေ ရှုပျထှေးမှုကွောငျ့ ရုရှားစဈရေးအခွအေနသေညျ ပွိုကှဲလုနီးပါး ဖွဈခဲ့ရပါသညျ။ ၁၉၉၂ ခုနှဈ၊ ဧပွီလတှငျ ရုရှားအစိုးရအနဖွေငျ့ ဆိုဗီယကျအရာရှိနှငျ့ စဈသညျ ၂ ဒသမ ၆ သနျး ဟု ဖျောပွသျောလညျး အမှနျတကယျမှာမူ ထိုထကျနညျးပါးလကျြ ရှိပါသညျ။ ၁၉၉၄ ခုနှဈတှငျ စဈမှုထမျး ၁ ဒသမ ၅ သနျး ဟု ဖျောပွသျောလညျး ၄ငျးမှာ ပိုမိုခနျ့မှနျးဖျောပွထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။
(၃) ပိုမိုကောငျးမှနျစရေနျ ထိနျးခြုပျသညျ့ စံသတျမှတျခွငျး .
ရုရှားတပျမတျောမှာ အစိုးရနှငျ့ KGB ကွား ဓားစာခံ ဖွဈခဲ့ပွီး ၁၉၈၀ ခုနှဈနောကျပိုငျးတှငျ အငျအားခြိနဲ့လာခဲ့သညျ။ ၁၉၉၁ ခုနှဈတှငျ KGB မှာ အာဏာပိုမိုကွီးထှားလာကာ ဆိုဗီယကျယူနီယမျကို ဦးဆောငျခဲ့ပါသညျ။ ကာကှယျရေး အသုံးစရိတျလြှော့ခပြွီး တပျမတျောကို ဆငျးရဲမှဲတစေခေဲ့သျောလညျး ၁၉၉၃ ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒရေေးဆှဲရေးကိစ်စတှငျသာ ပါဝငျခဲ့ပွီး သမ်မတ ယယျဆငျ၏ အမိနျ့အာဏာဖွငျ့သာ ရပျတညျနခေဲ့ပါသညျ။
တပျမတျောအသှငျပွောငျးလဲရေးမှာ ရုရှားနိုငျငံ လုံခွုံရေးနှငျ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့ ဆကျစပျနပေါသညျ။ အဓိက ယှဉျပွိုငျမှုမှာ အနောကျအုပျစု ပုံစံအဆငျ့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးခွငျး၊ အရညျအခငျြး ပွညျ့ဝသော အငျအားကွီးတပျဖှဲ့ ဖှဲ့စညျးနိုငျခွငျးတို့ ဖွဈပါသညျ။ ပထမ ခခြေငျြးညာစဈပှဲ (၁၉၉၄-၁၉၉၆) ခုနှဈတှငျ အငျအား ၁ ဒသမ ၅ သနျးရှိသျောလညျး အငျအား (၄၀၀၀၀) သာ ပါဝငျခဲ့ပါသညျ။ ဒုတိယ ခခြေငျြးညာစဈပှဲ (၁၉၉၉- ၂၀၀၇) ခုနှဈတှငျ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Sergei Ivanov အနဖွေငျ့ အဆငျ့မွငျ့ လထေီးတပျရငျး ဖှဲ့စညျးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈ Rossia – Georganian စဈပှဲအပွီးတှငျ ပုံစံသဈရုရှားတပျကို အသှငျပွောငျးနိုငျ ခဲ့ပါသညျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈတှငျ အရာရှိ (၃၃၅၀၀၀) မှ (၂၂၀၀၀၀) ခနျ့သို့ အငျအား လြှော့ခခြဲ့ပါသညျ။ တပျမတျော၏ အမာခံကြောရိုးအဖွဈ NCO (အရာခံ၊ အကွပျတပျသား) တို့ကို တိုးခြဲ့ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါသညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျ ဖှဲ့စညျးပုံ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံအား အမွဲတနျး အငျအားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျအောငျ ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါသညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ အငျအား (၄၀၀၀၀၀) နှငျ့ စဈမှုမထမျးမနရေဥပဒဖွေငျ့ အငျအား (၂၇၆ ၀၀၀) ရှိပါသညျ။ အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရသျော တပျမတျော ပုံစံပွောငျး ဖှဲ့စညျးမှုမြား အောငျမွငျလကျြရှိပါသညျ။
ခရိုငျးမီးယား၊ ယူကရိနျးနှငျ့ Donbas ဒသေစဈပှဲမြားတှငျ အဆငျ့မွငျ့စဈသညျတို့ကို အသုံးပွု တိုကျခိုကျအောငျမွငျခဲ့ပွီး ဆီးရီးယားဒသေလညျး အပါအဝငျဖွဈခဲ့သညျ။ ယခုအခါ ရုရှားအနဖွေငျ့ ခတျေမီတပျမတျောအဖွဈ တညျထောငျနိုငျပွီဖွဈသျောလညျး ရုရှားနိုငျငံတျောအတှကျ အရေးပါသော ကဏ်ဍမှ ပါဝငျနိုငျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးရဦးမညျဖွဈပါသညျ။ ၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျ စဈသညျအငျအား (၉၅၀၀၀) ထပျမံရရှိနိုငျရေးအတှကျ ဘဏ်ဏာငှရေရှိရေး သံသယဖွဈဖှယျ ရှိနပေါသညျ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမှု ရုရှားအနဖွေငျ့ တပျမတျောအငျအားရှိမှ တိုငျးပွညျအငျအားရှိမညျ ဆိုသကဲ့သို့ အငျအားကောငျးမှနျသော တပျမတျောဖွဈရနျ ကွိုးပမျးရပါသညျ။
တပျမတျောကို အသှငျပွောငျးရာတှငျ နိုငျငံရေးသွဇာမရှိသူ ပွညျသူမြား မပါဝငျမှုကွောငျ့ နှဈရှညျ လုပျဆောငျရမညျ ဖွဈပါသညျ။ ၁၉၉၀ ခုနှဈ ယယျဆငျ၏ အငျအားခြိနဲ့သော ဦးဆောငျမှုကွောငျ့ စဈဘကျ နှငျ့ အရပျဘကျဆကျဆံရေး ပွိုကှဲလုနီးပါး ဖွဈခဲ့သျောလညျး ၁၉၉၃ အခွခေံဥပဒေ ရေးဆှဲရေးကွောငျ့ ပွနျလညျ ကောငျးမှနျလာခဲ့ပါသညျ။ ဒူအာလှတျတျောအနဖွေငျ့ ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျ ပွငျဆငျခှငျ့ရရှိရေးအတှကျ မစှမျးဆောငျနိုငျပါ။ ယယျဆငျအနဖွေငျ့ ကာကှယျရေး အသုံးစရိတျနှငျ့ စဈဗိုလျခြုပျအရာရှိကွီးမြား၏ အာဏာကို ခြုပျကိုငျလိုသျောလညျး မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပါ။
၂၀၀၄ ခုနှဈတှငျ အရပျသား Sergei Ivanov အား ကာကှယျရေး ဝနျကွီး အဖွဈခနျ့အပျခဲ့ပါသညျ။ ၄ငျးမှာ တပျမတျော အရာရှိမဟုတျဘဲ KGB နှငျ့ FSB အကွီးအကဲ ဖွဈပါသညျ။ ပူတငျအနဖွေငျ့ ၂၀၀၀ ခုနှဈမှ ၂၀၀၈ ခုနှဈအတှငျး ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျ (၂) ဆရရှိအောငျ ဆောငျရှတျနိုငျခဲ့သဖွငျ့ ပူတငျနှငျ့ မကျဗီဒကျတို့သညျ အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့ပါသညျ။
(၆) ဗလာဒီမီယာပူတငျ နှငျ့ စဈရေး
တပျမတျောနှငျ့ ဆကျနှယျမှုသညျ ပူတငျ၏ ဥပဒပွေဌာနျးမှုအတှကျ အရေးပါသညျ။ တပျမတျောသညျ ၄ငျး၏ နိုငျငံခွားရေးမူဝါဒ တညျမွဲရေးအတှကျ အရေးပါသညျ။ ရုရှားပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ပူတငျသညျ တပျမတျောကို လေးစားပွီး ရုရှားနိုငျငံ မဟာဩဇာရရှိရေးအတှကျ ခိုငျမွဲသော နိုငျငံခွားရေးဝါဒကို စှဲကိုငျသော သူအဖွဈ မှတျယူကွသညျ။ KGB နှငျ့ FSB အတှအေ့ကွုံမြားအရ ပူတငျသညျ တပျမတျောနှငျ့ နိုငျငံလုံခွုံရေးကို စိတျဝငျစားသူဖွဈသညျ။ ရုရှားနိုငျငံအား NATO နှငျ့ အငျအားယှဉျပွိုငျနိုငျရေးမှ နိုငျငံအာဏာ ထိနျးသိမျးနိုငျရေး အတှကျ လုပျဆောငျလကျြ ရှိသညျ။
ရုရှားနိုငျငံ၏ စီးပှားရေးအားနညျးမှုကွောငျ့ အနောကျအုပျစုနှငျ့ ယှဉျပွိုငျနိုငျရနျ ခကျခဲကွောငျး၊ ယငျးအတှကျ ပူတငျအနဖွေငျ့ တပျမတျောအား ခတျေမီတပျမတျောအဖွဈ အသှငျပွောငျးရေးအတှကျ မညျသို့ လုပျဆောငျမညျကို ရုရှားစာစောငျမြားက ဖျောပွနပေါသညျ။ ခတျေမီတိုကျလယောဉျနှငျ့ လကျနကျမြားကို ပွသနသေျောလညျး လုံလောကျသော အရအေတှကျထုတျလုပျရနျ ငှကွေေးမလုံလောကျမှု ဖွဈပျေါနပေါသညျ။ NATO မဆိုထားနှငျ့ တရုတျနှငျ့ပငျ ယှဉျပွိုငျရနျပငျ လုံလောကျသော ဘဏ်ဍာအငျအားမရှိဟု ဆိုရပမေညျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျ စဈသညျအငျအား (၉၅၀၀၀) ရရှိရနျပငျ ခကျခဲနပေါသညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျ အငွိမျးစားယူမညျ့ အသကျကို တိုးမွှငျ့ခဲ့သောကွောငျ့ ဆန်ဒပွမြား ကွုံတှခေဲ့ရပါသညျ။ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးခဲ့သော ၂၀၀၀ ခုနှဈနှငျ့ ၂၀၁၀ ခုနှဈ တို့မှာ လှနျမွောကျခဲ့ပွီး မွငျ့မားနသေော ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျ ထိနျးထားနိုငျရနျ နိုငျငံရေးအခကျအခဲနှငျ့ ကွုံတှနေ့ရေပါသညျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈ ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျ၏ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးမှာ စာရငျးပြောကျနပေါသညျ။ လကျစားမှုပွဿနာကွောငျ့ ပူတငျ၏ နိုငျငံရေး အနအေထားမှာ ပကျြပွယျသှားနိုငျပါသညျ။ လကျစားမှုကို တိုကျဖကျြနိုငျမှသာလြှငျ နိုငျငံရေးအောငျမွငျမှု ရရှိပါမညျ။
ပူတငျအနဖွေငျ့ တပျမတျော အငျအားကွီးထှားရေးအတှကျ မညျသို့ပငျ ကွိုးပမျးလုပျဆောငျနသေျောလညျး မွငျနိုငျသော အနာဂတျတှငျ NATO နှငျ့ ယှဉျနိုငျသောအဆငျ့သို့ မရောကျရှိနိုငျသေးပေ။ အကွောငျးမှာ အနောကျအုပျစုနိုငျငံမြားနှငျ့ စီးပှားရေး မယှဉျနိုငျသောကွောငျ့ပငျ ဖွဈသညျ။ ယခုဖွဈရပျမှာ ဇာဘုရငျ လကျထကျမှာစ၍ ယနတေို့ငျဖွဈပါသညျ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ ရုရှားနိုငျငံသညျ ထငျမွငျရသကဲ့သို့ မသနျစှမျး၊ ထငျမွငျရသကဲ့သို့ အငျအားမခြိနဲ့ပါ ဟူသော စကားပုံမှာ ယခုအခြိနျထိ မှနျကနျနပေါသညျ။ ကွိုးစားတညျဆောကျနသေျောလညျး တပျမတျောအသှငျပွောငျးရေးမှာ လိုအပျခကျြမြားစှာရှိနပေါသညျ။ ရုရှား အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေးကို ထိခိုကျစသေောအရာမှာ ဘဏ်ဍာရေး ပငျဖွဈပါသညျ။ တပျမတျော အနဖွေငျ့ အရပျဘကျဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျရနျ မညျသို့ပငျ ကွိုးစားနသေျောလညျး အသုံးစရိတျ မလုံလောကျမှုကွောငျ့ အသုံးစရိတျ မလုံလောကျမှုကွောငျ့ အကောငျအထညျမဖျောနိုငျပေ။
ထိုသို့ကာကှယျရေး အသုံးစရိတျဖွတျတောကျမှုမှာ ပူတငျအတှကျ ပွဿနာ ဖွဈပျေါစပေါသညျ။ ၄ငျး၏ ရညျမှနျးခကျြ အကောငျအထညျဖျောနိုငျရေးအတှကျ ဘဏ်ဏာငှေ လိုအပျသညျ။ ဗိုလျခြုပျကွီးမြား အနဖွေငျ့ Putin ၏ Hawkish Foreign Policy ကို ထောကျခံပံ့ပိုးပေးလိုသျောလညျး ယူကရိနျးနှငျ့ ဆီးရီးယား ကဲ့သို့သော ကိစ်စမြားတှငျ ဘဏ်ဏာရေး အသုံးစရိတျမြား ကုနျကမြှုအတှကျ ခကျခဲနပေါသညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျ ပွငျဆငျခဲ့သော အငွိမျးစားယူခှငျ့ သကျတမျးတိုးမွှငျ့ရေးကိစ်စကွောငျ့လညျး ပါဝငျပါသညျ။ ၂၀၀၀ ခုနှဈထိ ရုရှားစီးပှားရေးကောငျးမှနျခဲ့သျောလညျး ၂၀၁၄ ခုနှဈ စီးပှားရေးကဆြငျးမှုကွောငျ့ ရုရှားပွညျသူမြားမှာ ပူတငျ၏ Hawkish Foreign Policy နှငျ့ တပျမတျောအငျအားကွီးထှားရေးကို ယုံကွညျမှု ကငျးမဲ့နကွေပါသညျ။
ဘဏ်ဏာရေးပွဿနာနှငျ့ လာဘျစားမှုပွဿနာမှာ ပူတငျ၏ အုပျခြုပျရေးအား ထိခိုကျစသေော အခကျြဖွဈပါသညျ။ ကာကှယျရေးအသုံးစရိတျ ဖွတျတောကျမှုမြားအား ဟနျ့တားနိုငျပါက ၄ငျးအတှကျ ထောကျခံမှု ပိုမိုရရှိစမေညျ ဖွဈပါသညျ။ ကာကှယျရေး အသုံးစရိတျဖွတျတောကျခွငျး မပွုပါက လူမှုအကြိုးခံစားခှငျ့ကို ဖွတျတောကျရမညျ ဖွဈသျောကွောငျ့ ပွညျသူလူထု၏ ခါးသီးသော ခံစားခကျြမြား ခံစားရမညျဖွဈပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရနျ အရေးကွီးကွောငျး စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု မရှိပါက နိုငျငံတှငျး အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေးကို တိုးမွှငျ့လုပျဆောငျရနျ ခကျခဲကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရနျ နိုငျငံရေးဘောဂဗဒေဆိုငျရာ သီအိုရီမြားကို ထညျ့သှငျးဆငျခွငျလုပျဆောငျပွီး အကောငျအထညျဖျောသငျ့ကွောငျး တငျပွအပျပါသညျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရသျော စီမံခနျ့ခှဲမှုပညာဆိုသညျမှာ လှနျစှာအငျမတနျမှ အရေးကွီးပွီး နိုငျငံတျောတညျဆောကျရေး၊ နိုငျငံတျော၏ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး စသညျတို့အပျေါတှငျ မြားစှာ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိစပွေီး နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ ဆုံးဖွတျခကျြမြားကို ဆောငျရှကျရာတှငျ အမရေိကနျနိုငျငံသမ်မတ၏ အကွောငျးကိုလလေ့ာခွငျးဖွငျ့ Digital Diplomacy နှငျ့သကျဆိုငျသော သမ်မတ၏ သေးငယျသော အပွုအမူလေးကပငျလြှငျ နိုငျငံ၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားထဲမှ အခနျးကဏ်ဍ ဖွဈသော ခရီးသှားလုပျငနျးအပျေါတှငျ ကွီးမားသော ပွောငျးလဲမှုမြားကို ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ နိုငျငံတဈနိုငျငံ၏ အဓိကအခကျြအခြာဖွဈသော ‘တပျမတျောအငျအားရှိမှ တိုငျးပွညျအငျအားရှိမညျ’ ဟူသော ဆောငျပုဒျနှငျ့အညီ နိုငျငံ၏ ကောငျးမှနျသညျ့ အငျအားပွယုဂျဖွဈသော အငျအားမြားကို ဖျောဆောငျရာတှငျ အရပျဖကျ – စဈဖကျဆကျဆံရေးသညျ အပွနျအလှနျ အကြိုးဖွဈထှနျးစသေော တပျမတျောဘကျမှတှေးချေါသော ပွညျသူမြား၏ အကြိုးစီးပှားကို ဖွဈထှနျးစမေညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြား၊ စီးပှားရေးအမွငျဘကျမှ ပွနျလညျစဉျးစားသော တပျမတျော၏ ကာကှယျရေးအငျအားမွှငျ့တငျမှုအပျေါ အကြိုးသကျရောကျစသေော ဆုံးဖွတျခကျြမြား၊ ညီညှတျမြှတစှာ ဆောငျရှကျခွငျးမြားကို ပွုလုပျသငျ့ကွောငျး ရုရှားနိုငျငံ၏ ခေါငျးဆောငျဖွဈသော သမ်မတ ဘလာတီမီယာပူတငျ၏ ဆုံးဖွတျခကျြမြားကို တှမွေ့ငျနိုငျပါသညျ။
တဈပွိုငျနကျထဲတှငျ နိုငျငံတဈနိုငျငံ၏ သမ်မတဖွဈသော အမရေိကနျသမ်မတသညျ သမ်မတရာထူးနှငျ့ မညီ မသငျ့တျောသော လုပျရပျမြားကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အငျအားကွီးနိုငျငံဟု မိမိကိုယျကိုသတျမှတျထားသော အမရေိကနျ နိုငျငံ၏ သေးငယျသော ခရီးသှားလုပျငနျးပငျလြှငျ အနုတျလက်ခဏာပွသော ပွောငျးလဲမှုမြား ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ။ ၎င်းငျးဥပမာကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ကွီးမားသော နိုငျငံ၏ အခွားကဏ်ဍမြားကို ဆုံးဖွတျရာတှငျ မညျမြှသော ဆိုးကြိုးမြားကို ဖွဈပျေါစနေိုငျသနညျး ဟူသော မေးခှနျးမြားမှာ ထှကျပျေါလာနိုငျမညျ မဟုတျပါလား။ ထို့ကွောငျ့ နိုငျငံတဈနိုငျငံ၏ ခေါငျးဆောငျမြားသညျ ဆုံးဖွတျခကျြမြား ခမြှတျရာတှငျ National Interest ဟူသော အမြိုးသားအကြိုးစီးပှားကို ထညျ့သှငျး စဉျးစားသငျ့ကွောငျး တငျပွအပျပါသညျ။
(ရဲမငျးအောငျသညျ စီးပှားစီမံခနျ့ခှဲမှုအပိုငျးနှငျ့ပတျသတျပွီး ပါရဂူကမျြး ပွုစုနသေူ တဈဦးဖွဈသညျ။ စီးပှားစီမံခနျ့ခှဲမှုအပိုငျးနှငျ့ပတျသတျပွီး Project Management၊ Business Management နှငျ့ Administration အစရှိသညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို လလေ့ာခဲ့သညျ။ စာရေးသူသညျ စီးပှားစီမံခနျ့ခှဲမှု (မဟာဘှဲ့) ကို ရရှိထားသူ ဖွဈသညျ။ စီးပှားစီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာ ပါရဂူဘှဲ့ကို တကျရောကျသငျယူနဆေဲ ဖွဈသညျ။ ယခုဖျောပွသညျ့ စီးပှားရေး – စဈရေးဆကျစပျမှုနှငျ့ ခေါငျးဆောငျတို့၏ အပွုအမှု ဆောငျးပါးသညျ စာရေးသူ၏ ပါရဂူဘှဲ့အတှကျ တဈစိတျတဈပိုငျးလိုအပျသညျ့ ထုတျဝမှေုကို ပွုလုပျသညျ့အနဖွေငျ့ ရေးသားတငျပွခွငျး ပငျဖွဈပါသညျ။)